Fameperana fitsangatsanganana vaovao ho an'ireo mpitsidika an'i Hawaii
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Fameperana fitsangatsanganana vaovao ho an'ireo mpitsidika an'i Hawaii
Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
John de Fries, tale jeneralin'ny fizahan-tany any Hawaii
Saika feno ny hopitaly any Hawaii, zara raha misy ny fandriana ICU, fa mpitsidika 20,000 XNUMX mahery no mbola tonga ao Aloha Lazao isan'andro.
Taorian'ny fahanginana nandritra ny herintaona, ny CEO CEO Hawaii Tourism Authority dia miteny ankehitriny amin'ny fanentanana ireo mpitsidika sy ny mponina hijanona ao an-trano fa tsy handeha.
Izany no navoakan'ny governoran'i Hawaii Ige androany.
Governoran'i Hawaii. David Ige androany dia niantso ny mponin'i Hawaii sy ny mpitsidika hampihemotra ny dia tsy ilaina rehetra amin'ny faran'ny volana oktobra 2021 noho ny fitomboan'ny tranga COVID-19 haingana izay mihoa-pampana ny tobim-pitsaboana sy ny enti-miasa amin'ny fanjakana.
Ny governora Ige dia nanao ny fanambarana ny zoma lasa teo tamin'ny famelabelaran-kevitra tamin'ny fampahalalam-baovao, ary nanamarika fa, "Ny hopitalintsika dia mahatratra ny fahafaha-manao ary feno ny ICU. Tsy fotoana mety izao handehanana any Hawaii. ”
Hoy koa ny governora Ige: “Haharitra enina ka hatramin'ny fito herinandro vao hahita fiovana lehibe amin'ny isan'ny tranga COVID. Fotoana mampidi-doza ny fivezivezena izao. Ny olona rehetra, ny mponina ary ny mpitsidika dia tokony hampihena ny fivezivezena amin'ny asa aman-draharaha tena ilaina fotsiny. ”
Mbola feno mpitsidika i Hawaii. Fivarotana lehibe toy ny Ala Moana Shopping Center, Waikiki, ary ny ankamaroan'ny hotely feno. Lany ny flights, saingy mety hifarana tsy ho ela izany.
Ny fizahantany no indostria ara-barotra lehibe indrindra ao amin'ny Aloha Fanjakana. Ny fameperana vaovao amin'ny fahatongavan'ireo fizahantany dia mety hanimba ity indostria ity sy ny toekarena ao amin'ny State of Hawaii.
Miaraka amin'ny tranga 1000 vaovao an'ny COVID-19, hopitaly feno, tsy maharitra intsony ny fizahan-tany amin'izao fotoana izao ao amin'ny Aloha Fanjakana. Ny manam-pahefana any Hawaii sy ny sisa amin'ny Etazonia dia nametraka ny toekarena ho an'ny fahasalamana, ary hita izao fahadisoana izao - ary mampatahotra izany. Hawaii amin'ny maha-firenena nosy azy dia mbola misy fanamby lehibe kokoa.
John De Fries, filoha ary tale jeneralin'ny Hawaii fizahan-tany fizahan-tany dia nanamarika fa na dia efa manomboka mihena aza ny fahatongavan'ireo mpitsidika amin'ny ankapobeny, toy ny tantara tamin'ny tranga tamin'ny fararano dia tokony hihevitra ny mpitsidika ny fanemorana ny diany mankany Hawaii.
"Ny vondrom-piarahamoninay, ny mponina ary ny indostrian'ny mpitsidika dia tompon'andraikitra amin'ny fiaraha-miasa hiatrehana io krizy io," hoy i De Fries. "Araka izany, manoro hevitra mafy ireo mpitsidika izahay fa tsy izao no fotoana mety hivezivezena, ary tokony hampihemotra ny faran'ny volana oktobra izy ireo."
Dr. Elizabeth Char, talen'ny departemantan'ny fahasalamana, dia nanantitrantitra ny maha maika ny toe-javatra ankehitriny. "Ny firongatry ny tranga COVID dia noho ny fielezan'ny fiarahamonina, arahin'ireo mponina manidina amin'ny faritra mafana any ivelany ary mamerina ny COVID any amin'ny ankohonany sy ny fiarahamonin'izy ireo," hoy i Char. "Raha tsy miova ny toe-javatra, dia ho kilemaina ny rafi-pitsaboana eto amintsika ary ireo izay mila fitsaboana amin'ny karazana aretina, ratra ary toetoetra, anisan'izany ireo mpitsidika anay, dia mety hahita fa sarotra ny mahazo ny fitsaboana ilain'izy ireo eo noho eo."
Ilay avy any Hawaii Tambajotra fizahan-tany manerantany nanentana ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii sy ny governoran'i Hawaii Ige mba hanao zavatra. Tsy niraharaha io fangatahana io ary novaliana tamin'ny fandraràna ity famoahana gazety ity tsy hametraka fanontaniana amin'ny hetsika fanaovan-gazety.
eTurboNews voafina mialoha ny famerana hafa ho avy, ary ity no dingana voalohany anio.
Amin'izao fotoana izao dia misy fameperana ny dia ho an'ny nosy Hawaii lehibe rehetra, ao anatin'izany ny nosy Oahu, Kauai, Maui, Hawaii (Big Island), Molokai, ary Lanai.
Tafiditra ao anatin'izany ny famerana ny fivezivezena any Pasifika takiana amin'ireo mpandeha rehetra tsy vaksiny ankehitriny ao Etazonia.
Amin'izao fotoana izao, noho ny firongatry ny tranga eo an-toerana nateraky ny karazana Delta, azo vinavinaina fa azo apetraka indray ny fameperana ny dia, anisan'izany ny fitsapana PCR ho an'ny olona rehetra tonga ao amin'ny Aloha Fanjakana mba hisorohana ny quarantine 10 andro mbola tsy maintsy atao.
Ny fitsapana dia tsy maintsy atao ho an'ny mpandeha tsy vita vaksiny ihany.
Tamin'ny 10 Aogositra ireto baiko vaovao manaraka ao amin'ny Fanjakana ireto dia nasain'ny governora Ige.
Ny fivoriana ara-tsosialy dia hoferana ho olona tsy mihoatra ny 10 ao an-trano ary tsy mihoatra ny 25 any ivelany.
Ireo mpiaro ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana dia tsy maintsy mijanona miaraka amin'ny antoko mitazona farafahakeliny 6 ft eo anelanelan'ny vondrona (miaraka amin'ny vondrona ambony indrindra 10 ao anaty trano sy 25 any ivelany); tsy hisy fifangaroana, ary saron-tava tsy maintsy hanaovana amin'ny fotoana rehetra afa-tsy rehefa misakafo na misotro.
Ny kaonty dia handinika ny tolo-kevitra ho an'ny hetsika tohanan'ny asa aman-draharaha rehetra ho an'ny olona maherin'ny 50, mba hahazoana antoka fa hampiharina ireo fomba fanao azo antoka. Ireo mpikarakara ireo hetsika matihanina ireo dia tokony hampandre sy hifampidinika amin'ireo masoivohom-pokontany manaraka alohan'ny hetsika. Ny fankatoavana ny County dia takiana amin'ny hetsika matihanina ho an'ny olona maherin'ny 50.
Juergen Steinmetz, filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany hoy ny valiny tamin'ity fanambarana ity: Faly aho mahita ny HTA miteny amin'ny farany. Mazava ho azy fa tranontsika koa io, ary ny zava-mitranga eto dia mahatonga azy io ho an'ny tena manokana. Atolotray indray ny Manampahefana momba ny fizahan-tany any Hawaii ny fanohananay hiara-hiasa amin'ny tambajotranay manerantany sy ireo manam-pahaizana ary mpitarika any amin'ny firenena 128 handrindra sy hihetsika amin'ity krizy mampidi-doza ity.
Novonoin'i COVID i Ekundo! Aloha ho an'ny liona afrikanina ao ...
Ny vahiny vita vaksiny feno dia afaka miditra ao Etazonia manomboka ...
Giant E-Commerce Shinoa Hanangana Airline Vaovao
Ny fizahantany Ogandà izao dia mikendry ireo tale jeneralin'ny famporisihana an-trano...
Rehefa mihabe ny karazany COVID-19 dia misaron-tava amin'ny fiaramanidina ...
33% amin'ireo amerikanina tsy vita volo no nilaza fa tsy hahazo ...
An’ny sekretera jeneraly ny UNWTO: Very in...
Ny fetin'ny fiadiana ny amboaran'i Carolina dia any amin'ny Surfers Top Paddle
Ny FAA dia mametraka faritra tsy misy sidina eo ambonin'ny tetezan'i Texas, feno ...
Beaches® Resorts te-hanao ny dadabe sy bebenao ...
Tianao ve ny sakafo Bali? Tongasoa eto Bali
Seychelles fizahan-tany dia manomboka amin'ny varotra isan-taona ...
Sidina avy any Kazakhstan mankany Maldives amin'ny Air Astana ...
Columbia China Manokatra Hopitaly Vaovao Vaovao sy lehibe indrindra ao ...
COVID-19 alika sniff tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Miami
IATA dia manohana ny taratasy fanamarinana nomerika COVID eropeana ho ...
Sidina vaovao manelanelana ny Nosy Toronto sy Ottawa amin'ny Air ...
Japoney hamarana ny fanjakana vonjy taitra COVID-19 amin'ity herinandro ity
UNWTO General Assembly izao any Madrid: Zurab ...
CDC: ny famaritana ny 'vaksiny feno' dia mety mila ...
Jamaica dia manamafy 50+ sidina vaovao isan-kerinandro eo anelanelan'ny Kanada ...
Niverina tany Budapest niaraka tamin'ny London i British Airways ...
Nitrangana fihetsiketsehana mahery vaika tany Sydney ary ...
Hafa noho ny Safaris Wildlife, Fizahan-tany Golf izao ao ...
Jane Clausing hoy:
28 Aogositra 2021 amin'ny 13:57
Izaho dia mpizahatany iray izay tokony ho any Maui amin'ny herinandro ambony. Manafoana izahay noho ny fangatahan'ny governora sy ny ben'ny tanàna. Sarotra ny fanafoanana satria tamin'ny tsingerintaona faha-50 taonantsika, saingy manandrana ny marina izahay. Ny mpamatsy trano fonenanay dia mandà ny hiara-miasa aminay na oviana na oviana (7500 $ no alainay raha te hanao ny tsara). Ny orinasam-pandraharahana mifandraika amin'ny dia rehetra dia eo am-pamoahana ny famandrihana miaraka amin'ny famerenam-bola feno, ao anatin'izany ny saran-dalamby. Mahatsiaro ho zatra izahay!
28 Aogositra 2021 amin'ny 06:49
Manaiky tanteraka anao Sharon! Fihatsarambelatsihy hatrany ankavia!
26 Aogositra 2021 amin'ny 16:56
Mandritra izany fotoana izany dia manohy manokatra malalaka ny vavahadin-tsisintsika misokatra amin'ny Covid Positive Illegals i Joe Biden, ary avy eo mitaraina momba ny Delta Variant. Fihatsarambelatsihy. Raha tena niahy ny fiparitahan'ny Covid izy dia hanidy ny sisintanintsika avy any Mexico.
24 Aogositra 2021 amin'ny 01:53
VT nanidy ny fanjakany ho an'ny tsy mponina, maninona no tsy hatsiaka HI?